Mandany toerana fanariam-pako bilidaozera SD7HW - China Xuanhua Construction milina
SD7HW bilidaozera dia 230 horsepower lalana-karazana dozer amin'ny avo sprocket, fahefana fanovana fiara, semi-henjana hydraulic mihantona sy fanaraha-maso. SD7HW-230 horsepower, avo sprocket bilidaozera mampiditra amin'ny endrika Modular dia mora ny hanamboatra & fikojakojana, izany hahamaivana ny fahorian'ny menaka amin'ny tsindry samy hafa, ny hydraulic rafitra manao afa-miaro ny tontolo iainana sy angovo avo miasa fahombiazana. Safety aina toe asa, fanaraha-maso sy ny herinaratra amin'ny trano fialan-tsasatray Rops azo antoka Qual manontolo ...
SD7HW bilidaozera dia 230 horsepower lalana-karazana dozer amin'ny avo sprocket, fahefana fanovana fiara, semi-henjana hydraulic mihantona sy fanaraha-maso.
SD7HW-230 horsepower, avo sprocket bilidaozera mampiditra amin'ny endrika Modular dia mora ny hanamboatra & fikojakojana, izany hahamaivana ny fahorian'ny menaka amin'ny tsindry samy hafa, ny hydraulic rafitra manao afa-miaro ny tontolo iainana sy angovo avo miasa fahombiazana. Safety aina toe asa, fanaraha-maso sy ny herinaratra amin'ny trano fialan-tsasatray Rops toetra azo antoka manontolo, asa fanompoana tena tsara no hendry kevitra tiany.
SD7HW amin'ny tany ambany tsindry dia milina tsara indrindra ampiasaina amin'ny fikirakirana ny fako.
(tsy ao anatin'izany ny Ripper) Operation lanja ( Kg) 2 5670
Ground tsindry (K Pa ) 51.96
Track habetsahan'ny (MG) 2235
Min. tany fangatahany fahazoan-dalana (MG) 484
Dozing fahafahana ( m ³) 13.4
Blade sakany (MG) 4382
Max. nandavaka lalina (MG) 635
Lafiny ankapobeny ( MG ) 5245×4382× 3482
Isan'ny mitondra rollers (lafiny tsirairay) 1
Previous: Avo-mitondra fiara bilidaozera SD9